Guddiga doorashooyinka Hirshabeele oo ka hadlay cabasho ay qabaan musharaxiin qaar. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddiga doorashooyinka Hirshabeele oo ka hadlay cabasho ay qabaan musharaxiin qaar.
Jowhar(Halqaran.com) Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa war kasoo saaray cabashada qaar kamida musharaxiintii u tartamayay kusraasta Aqalka Sare oo sheegay in laga hor istaagay in ay tartamaan, looguna goodiyay in la dili doono.
Guddiga waxay ugu baaqeen in ay musharaxiinta kala ah Cusmaan Axmed Macow iyo Cabdinuur Ibraahim Nuur oo hadda ku sugan Muqdisho ee cabashada gudbiyay in ay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar.
Sidoo kale guddiga ayaa dib u dhigay kursiga ay cabashada ka timid, wuxuuna ugu baaqay musharixiinta kursigaas inay ku laabtaan magaalada Jowhar ee caasimadda HirShabelle.